Talooyinkii ugu dambeeyay ee Mareykanka, UK, Midowga Yurub ee Boqortooyada Eswatini waxaa ka dhawaajiyay Golaha Dalxiiska Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Eswatini Breaking News » Talooyinkii ugu dambeeyay ee Mareykanka, UK, Midowga Yurub ee Boqortooyada Eswatini waxaa ka dhawaajiyay Golaha Dalxiiska Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Eswatini Breaking News • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Xog khaldan oo lagu faafiyo baraha bulshada ayaa loo aaneynayaa rabshadaha ka socda Boqortooyada Eswatini sida laga soo xigtay ilaha Dowlada. Khubarada siyaasada waxay u maleynayaan in xaalada ay uga sii dareen kooxaha kacdoonka shisheeye sababo la xiriira xaqiiqda ah in Eswatini uu u aqoonsan yahay Jamhuuriyadda Shiinaha ee loo yaqaan Taiwan in ka badan Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha iyadoo la ogol yahay caasimadda Beijing.
Dibadbaxyada iyo dhaca ayaa laga diiwaan galiyay Boqortooyada Afrika ee Eswatini.
Dadka Eswatini waxay dalbanayeen dimuqraadiyad. Isku daygan ugu horreeyay ee nabadeed waxaa burburiyey canaasiir dambiilayaal ah iyagoo ka faa'iideysanaya xaaladda jilicsan si ay wax u dhacaan, u dhacaan, oo u dilaan. Tan waxaa looga jawaabey rabshad badan.
Sida laga soo xigtay ilo dowladeed, dareenka xasiloonida ayaa soo laabtay HM King Mswati wuxuu ku baaqay Sibaya.
The Guddiga Dalxiiska Afrika is xarunteeduna tahay Eswatini waxayna ka dhawaajisay bayaanka wadajirka ah ee ay soo saareen Mareykanka, Midowga Yurub, iyo Boqortooyada Midowday oo ku baaqaya in la dejiyo wadahadal wax ku ool ah oo u dhexeeya dhammaan dhinacyada.
Waxay ku taalaa inta udhaxeysa Koonfur Afrika iyo Mozambique, wadanku wuxuu soo maray waxa Amnesty International ayaa qeexay iyada oo ah "weerar fool-ka-fool ah oo loo geysto xuquuqda aadanaha" iyada oo boqortooyadu ay si ba'an isku daydo in ay xukunka qabato.
Dalxiiska iyo dhacdooyinka dhaqameedku waa kuwa lacagta ugu badan ka kasbada meeshan qaaska ah ee Afrika.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah boqortooyooyinkii hadhay ee Afrika, dhaqanka iyo hiddaha ayaa si qoto dheer ugu xardhan dhammaan dhinacyada nolosha Swazi, iyagoo hubinaya waayo-aragnimo aan la ilaawi karin oo loogu talagalay dhammaan dadka booqanaya. Tani waa hal ku dhigga ah Dhiirrigalinta Dalxiiska Eswatini Websaydh.
HM King Mswati Wicitaankii King ee Sibaya ee jimcaha waxaa la kulmay dareenno kala duwan oo ka imanaya xubnaha bulshada.
Sida laga soo xigtay Waqtiyada Swaziland, Qaarkood waxay yiraahdeen way ku faraxsan yihiin in Boqorka uu ugu dambeyn la hadlo umadda ka dib dibadbaxyadii dimuqraadiyadda ee ugu dambeeyay rabshadaha, dhaca, iyo burburka hantida. Qaar kale waxay yiraahdeen waxay rumeysan yihiin inay dhakhso u tahay in wax laga qabto umadda, gaar ahaan sababta oo ah mowjadda saddexaad ee COVID-19.
Boqorka ayaa ugu yeeray Sibaya wicitaanka Indvuna Themba Ginindza shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay Ludzidzini Royal Residence. Boqorka wuxuu yiri dhamaan emaSwati waa in la fariisiyaa gudaha lo'da 10-ka subaxnimo. Boqorka ayaa sheegay in howlaha Sibaya si toos ah looga baahin doono si kuwa aan soo xaadirin goobta ay raacayaan raaxada guryahooda iyadoo loo marayo dhamaan warbaahinta. Boqortooyadu waxay carrabka ku adkaysay in kuwa la socon doona dacwadaha loo maro marinnada warbaahinta ay tahay inay si taxaddar leh u dhageystaan ​​waxa la dhihi doono.